လူမှုကွန်ရက်ကနေ Speak out လုပ်နေတဲ့သူများကို ပြောဆိုတဲ့ လူတစ်ချို့ကို ထိရောက်တဲ့စကားနဲ့ပြန်ပြောလိုက်တဲ့ ပိုင်ဖြိုးသု….. – Cele Snap
လူမှုကွန်ရက်ကနေ Speak out လုပ်နေတဲ့သူများကို ပြောဆိုတဲ့ လူတစ်ချို့ကို ထိရောက်တဲ့စကားနဲ့ပြန်ပြောလိုက်တဲ့ ပိုင်ဖြိုးသု…..
March 26, 2021 By Ju Ry Celebrity
ပရိတ်သတ်ရဲ့အချစ်တော် သရုပ်ဆောင်အကယ်ဒမီပိုင်ဖြိုးသုကတော့ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောဆိုတတ်ပုံလေးကြောင့် ပရိတ်သတ်တွေရဲ့အားပေးချစ်ခင်မှုကို အပြည့်အဝသိမ်းပိုက်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်.။ ပိုင်ဖြိုးသုကအရေးကြုံလာရင် ပြည်သူတွေနဲ့တစ်သားတည်းပါဝင်ခဲ့သူဖြစ်တာကြောင့် အားလုံးကလေးစားအားကျနေတာပဲဖြစိပါတယ်။သုသုကတော့ ကိုယ်ယုံကြည်ရာပန်းတိုင်ကို နောက်မဆုတ်ဘဲ ရှေ့သို့သာ ရပ်တည်ချက်ခိုင်မာစွာဖြင့် လျှောက်လှမ်းနေသူတစ်ယောက်ဆိုရင်လည်းမမှားပါဘူးနော်။
ပြည်သူတွေဒီထက်ပိုပြီး ပူးပေါင်းပါဝင်ရန် အတွက်လည်း သူမရဲ့ လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာများမှတစ်ဆင့် တိုက်တွန်းပေးနေသူတစ်ယောက်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလို Speak Out အမြဲလုပ်ပေးနေသူတွေအား မနာလိုသူတွေတစ်ချို့က ဝေဖန်တိုက်ခိုက်နေကြတာပါ။ မကြာသေးခင် နာရီပိုင်းလောက်ကလည်း သုသု ရဲ့ Facebook အကောင့်တွင် လူထုလှုပ်ရှားမှုတွေမှာ တက်ကြွစွာပါဝင်နေသူများအား အပြစ်တင်ပြောဆိုနေကြသူ တွေများကို ထိမိလှတဲ့ စကားလုံးတွေနဲ့ ပြန်လည်ချေပ ပြောဆိုလိုက်တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
” Federal Army တံဆိပ်လေးဖြစ်ဖြစ် နွေဦးတော်လှန်ရေး တံဆိပ်လေး‌ဖြစ်ဖြစ် Profile pictureလေး အရောင်ပြထားလိုက်တယ်…. Wall ထဲမှာ ဟိုသတင်း ဒီသတင်း အရောင်ပြshareထားတာလေး ၂ခု၃ခု…. ပြီးရင် Speak outလုပ်နေတဲ့လူတွေကို ပတ်ပြီးတိုက်ခိုက်တယ်…. မောင်လေးတို့ရေ…. အစ်မတို့ကမောင်လေးတို့အကွက်တွေ မမြင်ရအောင် အစ်မတို့ကမောင်လေးတို့လိုမျိုး ၃ယောက်လောက်ပေါင်း တာတောင် A for Apple, B for Ball ကမတက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးလေကွယ်…. စိတ်ချ…နင်တို့ကငါတို့ကိုစိတ်ဓါတ်ကျပြီး ဘာမှမတင်စေချင်လေ…ငါတို့တွေဘက်ကပိုပြီးတက်တက်ကြွကြွpostတွေတင်လေပဲဟေ့… နားလည်လား…. နားမလည်ရင်(၃)ခေါက်လောက်စာလုံးပေါင်းပြီးပြန်ဖတ်!!! #အရေးတော်ပုံအောင်ရမည်” ဆိုပြီး ရေးသားထားတာဖြစ်လို့ ပရိသတ်တွေလည်း သိရှိနိုင်စေရန်ဒီသတင်းလေးကို တစ်ဆင့်ပြန်လည် ကူးယူတင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်။ ဖတ်ရှုပေးတဲ့ပရိတ်သတ်ကြီးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်နော်။
ပရိတျသတျရဲ့အခဈြတျော သရုပျဆောငျအကယျဒမီပိုငျဖွိုးသုကတော့ ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျးပွောဆိုတတျပုံလေးကွောငျ့ ပရိတျသတျတှရေဲ့အားပေးခဈြခငျမှုကို အပွညျ့အဝသိမျးပိုကျထားတာပဲဖွဈပါတယျနျော.။ ပိုငျဖွိုးသုကအရေးကွုံလာရငျ ပွညျသူတှနေဲ့တဈသားတညျးပါဝငျခဲ့သူဖွဈတာကွောငျ့ အားလုံးကလေးစားအားကနြတောပဲဖွစိပါတယျ။သုသုကတော့ ကိုယျယုံကွညျရာပနျးတိုငျကို နောကျမဆုတျဘဲ ရှသေို့သာ ရပျတညျခကျြခိုငျမာစှာဖွငျ့ လြှောကျလှမျးနသေူတဈယောကျဆိုရငျလညျးမမှားပါဘူးနျော။
ပွညျသူတှဒေီထကျပိုပွီး ပူးပေါငျးပါဝငျရနျ အတှကျလညျး သူမရဲ့ လူမှုကှနျယကျစာမကျြနှာမြားမှတဈဆငျ့ တိုကျတှနျးပေးနသေူတဈယောကျလညျး ဖွဈပါတယျ။ ဒီလို Speak Out အမွဲလုပျပေးနသေူတှအေား မနာလိုသူတှတေဈခြို့က ဝဖေနျတိုကျခိုကျနကွေတာပါ။ မကွာသေးခငျ နာရီပိုငျးလောကျကလညျး သုသု ရဲ့ Facebook အကောငျ့တှငျ လူထုလှုပျရှားမှုတှမှော တကျကွှစှာပါဝငျနသေူမြားအား အပွဈတငျပွောဆိုနကွေသူ တှမြေားကို ထိမိလှတဲ့ စကားလုံးတှနေဲ့ ပွနျလညျခပြေ ပွောဆိုလိုကျတာပဲ ဖွဈပါတယျ။
” Federal Army တံဆိပျလေးဖွဈဖွဈ နှဦေးတျောလှနျရေး တံဆိပျလေး‌ဖွဈဖွဈ Profile pictureလေး အရောငျပွထားလိုကျတယျ…. Wall ထဲမှာ ဟိုသတငျး ဒီသတငျး အရောငျပွshareထားတာလေး ၂ခု၃ခု…. ပွီးရငျ Speak outလုပျနတေဲ့လူတှကေို ပတျပွီးတိုကျခိုကျတယျ…. မောငျလေးတို့ရေ…. အဈမတို့ကမောငျလေးတို့အကှကျတှေ မမွငျရအောငျ အဈမတို့ကမောငျလေးတို့လိုမြိုး ၃ယောကျလောကျပေါငျး တာတောငျ A for Apple, B for Ball ကမတကျတာလညျးမဟုတျဘူးလကှေယျ…. စိတျခြ…နငျတို့ကငါတို့ကိုစိတျဓါတျကပြွီး ဘာမှမတငျစခေငျြလေ…ငါတို့တှဘေကျကပိုပွီးတကျတကျကွှကွှpostတှတေငျလပေဲဟေ့… နားလညျလား…. နားမလညျရငျ(၃)ခေါကျလောကျစာလုံးပေါငျးပွီးပွနျဖတျ!!! #အရေးတျောပုံအောငျရမညျ” ဆိုပွီး ရေးသားထားတာဖွဈလို့ ပရိသတျတှလေညျး သိရှိနိုငျစရေနျဒီသတငျးလေးကို တဈဆငျ့ပွနျလညျ ကူးယူတငျဆကျပေးလိုကျရပါတယျ။ ဖတျရှုပေးတဲ့ပရိတျသတျကွီးကိုအထူးပဲကြေးဇူးတငျရှိပါတယျနျော။
အစစအရာရာ အဆင်ပြေဖြစ်နေတဲ့ ပြည်သူတွေအတွက် အစားအသောက်နဲ့ အလှူငွေတွေကိုသွားရောက်လှူဒါန်းခဲ့တဲ့ မမဆောင်းရဲ့ဗီဒီယိုလေး…..